छापा सुरु भयो? साइन्स को लागी 2018 मा Els Borst / बार्ट भ्यान U. केसमा आधारित हरित बत्ती दिइएको थियो: मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	12 नोभेम्बर 2019 मा	• 24 टिप्पणिहरु
जो कोही अझै पनी पूर्व मंत्री एल्स बोर्स्टको हत्याको सम्झना गर्दछन् र साईसपको अवधारणाको बारेमा त्यति थाहा थिएन त्यतिबेला धेरै प्रभावित भएको हुनसक्छ। बुर्स्टको हत्या एक 'भ्रमित व्यक्ति' द्वारा गरिएको थियो। कम्तीमा यो एक समय लाग्ने थियो जब एनएफआईलाई त्यहाँ अपराध छ भनेर थाहा थियो, बोर्स्ट रगतको पोखरीमा फेला परेको तथ्यको बाबजुद पनि। हामी यहाँ समयमै छौं, किनभने हामीलाई मिडियामा भएका सबै कथाहरू र तस्बिरहरू हुन् भनेर अब हामीलाई थाहा छ, उदाहरणका लागि, अल्जेमिन नेदरल्याण्ड पर्सब्युरो (एएनपी) एक टेलिभिजन निर्माताको हातमा छ; कसैको फिल्म स्टुडियो र अरबौं उसको बैंक खातामा। र त्यसकारण तपाईं यो कुरा निश्चितसँग भन्न सक्नुहुन्न कि यस्तो हत्याको केसलाई फिल्म स्क्रिप्टको रूपमा मात्र नयाँ पुलिस राज्य उपायहरूका लागि तयार गर्नका लागि मात्र राखिएको थिएन।
Op मार्च 11 2014 मैले यस Els Borst मुद्दामा लेखे: “तर सावधान रहनुहोस्, किनकि तपाईलाई यो थाँहा हुनु अघि GGD तपाईको ढोकामा जबरजस्ती प्रवेशका लागि छ"नोट गर्नुहोस् कि 'सेवा' को लागि D अब 'हेरचाह' को लागी Z द्वारा संक्षिप्त रूप मा प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2018 मा, के मैले चेताउनी गरिसकेको छु त्यो पहिले नै भइसकेको थियो। मन्त्री कागजातमा यी उपायहरूको घोषणा गर्दै कुन केस उल्लेख गरिएको छ भनेर पत्ता लगाउनु एकदम रोचक छ? ठीक हो, त्यो एल्स बोर्स्ट र उनको आरोपित हत्यारा बार्ट भ्यान यूको हो।
अब तपाईं भन्नुहुनेछ:हो, तर बार्ट भ्यान यूलाई दोषी ठहराइएको छ, 8 का लागि जेलमा वर्षौं भइसकेको छ र अनिवार्य उपचारको साथ TBS प्राप्त गरेको छ, त्यसैले यो वास्तवमै सत्य हो।"। साइकोपको विशेषता यो हो कि सम्पूर्ण खेल ए देखि जेडसम्म राजनीति, न्याय र मिडियाको सहयोगमा खेल्दछ; त्यस्ता मुद्दामा मिडिया तमाशा सहित। त्यसो भएमा उनीहरूलाई सामान्यतया स्वीकार नहुने कुनै चीजको परिचयका लागि मानिसहरू स्वीकृति मोडमा ल्याइनेछ, तर अब 'आवश्यक' को रूपमा अंगाले। PsyOps मा, अधिकतम सँधै हो 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान"लागू गरियो, जसको अर्थ हो कि ठूलो सामाजिक प्रभावको समस्या मिडिया र राजनीति मार्फत ठूलो क्रोध र भावनाको प्रतिक्रिया जगाउनको लागि सिर्जना गरिएको छ, र त्यसपछि सधैं शेल्फमा रहेको समाधान पेश गर्न। त्यसोभए यदि तपाईं मानिसहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ कि एउटा 'कन्फ्युज भएको मानिसले' एल्स बोर्स्टलाई मारेको छ भने तपाईंसँग अलिकता अलभ्राई हुन्छन् भ्रममा परेका मानिसहरूलाई लक गर्न। के बार्ट भ्यान यू साइकोप स्क्रिप्टमा चरित्र हो जुन यो कानून तयार पार्नुपर्‍यो? खैर, यो स्पष्ट रूप मा भनिएको छ अन्तिम रिपोर्ट स्वास्थ्य, कल्याण र खेल मन्त्रालयबाट भ्रमित ब्यबहारका साथ शिफ्ट टोली व्यक्तिहरू:
यी प्रतिबद्धताहरूको कारणले गर्दा, यो पत्र माथिल्लो सदन र तल्लो सदन दुबैलाई सम्बोधन गरिएको छ। तपाईंले भर्खर श्री होइकस्ट्राबाट बार्ट भ्यान यूको मामलाको अनुसन्धान पछिको सुधारका उपायहरूको बारेमा अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त गर्नुभयो।
त्यसोभए त्यो चिठीमा के छ? पत्रले वास्तवमा सबै GGZ क्षेत्रलाई साइकोल्यान्स खरीद गर्न निर्देशन दिन्छ। विशेष रूपले सुसज्जित कार 'कन्फ्युज भएका व्यक्तिहरू' लिन। यस्तो मनोविज्ञानले सामान्यतया विन्डोजलाई अन्धा तुल्याउँछ र कसैलाई सुरक्षित रूपमा बाँध्न केबिनमा सबै उपलब्ध साधनहरू छन्। तार्किक, तपाइँला लाग्न सक्छ, किनभने यस्तो भ्रमित व्यक्ति संघर्ष गर्न सक्दछ। अने फेबर केस पछि सबैलाई यो मनोविज्ञान परिचय दिन पूर्णरुपले मनाईएको थियो र थाइज एच को केसले स्वाभाविक रुपमा यो छविलाई पनि योगदान पुर्‍यायो कि हाम्रो देश भ्रमित मान्छेले भरिएको छ। दुबै केसमा मैले पूर्वानुमान गरेको थिएँ कि समाजमा असन्तुष्ट व्यक्तिलाई उनीहरूले 'भ्रमित व्यक्ति' कलंक दिएर उनीहरूलाई सफा गर्ने छन।
मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेखनीय केहि छ र अनिवार्य प्रवेशका लागि नयाँ कानूनको आशा गरिएको छ। कृपया तलको टुक्रा पढ्नुहोस् र याद गर्नुहोस् कि 1984 पुस्तकमा उनले जर्ज ओर्वेलले 'पार्टी' शब्दहरूको अर्थ बदल्ने बारेमा बोलेका छन्। उनले यसलाई "नयाँ बोली" बोलाउँदछन् ("डबल स्पीच" पनि भनिन्छ)। यो सँधै उल्लेखनीय छ कि शब्द 'हेरचाह' छनौट गरिएको छ, जसको लागि यदि तपाईले त्यस्ता GGZ संस्था भित्र हेर्नुभयो भने, धेरै ध्यान दिएर, तर विशेष गरी 'औषधि प्रशासनको बखत कैद'गर्नु छ। यो त्यो हो जुन रिपोर्टको लेखकहरूले सल्लाहको रूपमा अन्य चीजहरूमा समावेश गर्दछ।
अधिक कनेक्शन तुरून्त चाहिएको र सम्भव हुन सक्ने ट्र्याक्टोरीहरू: जबरजस्ती हेरचाह कानून, किनकि यी कार्यान्वयन चरणमा छन् र लक्षित समूहको महत्त्वपूर्ण भागको हेरचाहको संगठन निर्धारण गर्दछ।
त्यहाँ यति मात्र छ कि त्यहाँ अनिवार्य भर्नाको लागि मात्र कानून हुनुपर्दछ (किनभने कार्यान्वयन पहिले नै कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेको छ - संक्षेपमा: यो कानून बिना नै भैरहेको छ)। त्यो यसको सम्झना दिलाउने छ एडिथ स्किपर्स द्वारा बिल जसको बिरूद्ध मैले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत एउटा याचिका मस्यौदा तयार पारेको थियो पाँच हजार भन्दा बढी पटक हस्ताक्षर गरिएको थियो। अर्थात्, त्यो बिलको मतलब जसको वरपरका मानिसहरु आफू भ्रममा परेको हुन सक्छ भन्ने कुरा न्यायाधीश वा मनोचिकित्सकको हस्तक्षेप बिना साइकोलास द्वारा लिन सकिन्छ, र एक्सएनयूएमएक्स घण्टा अवलोकनको लागि कोठामा फ्याँक्न सकिन्छ (प्रशासनको सम्भावनाको साथ " औषधि ")। त्यो ऐन त्यसबेलासम्म अपनाइएको थिएन, तर यो मन्त्री पत्रमा दिइएको संकेत स्पष्ट छ कि त्यहाँ त्यो कानून राख्ने योजना वास्तवमै छ। र त्यसैले हामीलाई केहि साइकोप-जेस चाहिएको थियो मानिसहरूलाई अझ अगाडि स्वीकृति मोडमा ल्याउनका लागि। साथै ती GGZ कर्मचारीहरू निश्चित रूपमा विश्वस्त हुनुपर्दछ कि यदि तिनीहरू उनीहरूको साइकोलाससँग आउँछन् भने, यो केहिको लागि सायद राम्रो हुनेछ।
यो सबै 'भ्रमित व्यक्ति' को परिभाषा को बारे मा हो। जब कोही अलमल्लमा पर्छ? के यो केवल जब तपाई एउटा युवतीलाई मार्नुहुन्छ जसले आफ्नी बाइकमा एएनडब्ल्यूबी मार्ग चक्रमा जान आउँछिन् जो आँधीबेहरीमा एक्लो पनी सेनाको बारमा यसलाई गाड्न फ्याँक्छ, यसलाई खनेर र यसलाई तपाईको आमाको गाडीमा राख्छ। यसलाई फेरि गाड्न यातायात? के यो जब तपाईं अनियमित कुकुर वाकरहरूलाई छुरा दिनुहुन्छ किनकि तपाईं प्रेतहरूबाट असाइनमेन्ट पाउनुहुन्छ? वा यदि तपाईं सम्भाव्य रूपमा एक विपक्षी विद्रोही व्यवहार विकार हुनुहुन्छ र तपाईंको धारणा राज्यको भन्दा फरक छ भने तपाईं पनि एक भ्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ?
हामीले मिडियामा हेरेका चरम घटनाहरू मानिसहरूलाई कुन कुराले विश्वास दिलायो; ती केसहरू जुन मेरो लागी मनोवैज्ञानिक अपरेशन (PsyOps) हुन सक्छ। यद्यपि, अभ्यास यो हो कि जब मन्त्री पत्रमा घोषणा गरिएको कानून भर्खर आउँदैछ, तपाईका प्रियजनहरूले मनोविज्ञान कल गर्न सक्छन् र भन्छन् कि तपाई अलमल्लमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं एक न्यायाधीश वा मनोचिकित्सकको हस्तक्षेप बिना लिन सक्नुहुनेछ। रुनररवल्डले सताएको परिवार मिडिया प्रसारणले पहिले नै सर्च वारन्ट पाउनको लागि थ्रेसोल्ड हटाउने आधार तयार गरिसकेको छ। त्यसोभए तपाईंसँगै लैजान सकिन्छ, 'भूत परिवार' को 'भूत बुबा' जस्तो र अवलोकनका लागि लक हुन।
भाग्यवस, ती सबै धेरै क्लिनिकल रूपमा हुन्छन्। तपाईंको कुनै पनि छिमेकीले गुनासो गर्दैन। सबै पछि, यो एम्बुलेन्स जस्तो देखिन्छ, बस तपाईंले लिनु भएको बस। यसले विन्डोलाई अन्धा बनाएको छ र तपाइँ राम्ररी टाँसिएका हुनुहुन्छ। हुनसक्छ उनीहरूले तपाईलाई थोरै संघर्ष गर्दै गरेको सुन्नेछन्, तर तपाईका छिमेकीहरू पनि मिडिया मार्फत तयार छन् र अचम्म मान्नुपर्दैन। "तपाईंसँग सँधै केही असामान्य विचारहरू थिए"तिनीहरूले भन्नेछन्। द्वारा एक लेख मा GGZ संस्था मोन्ड्रियान हेरलेनबाट हामी निम्न मार्गहरू देख्छौं जुन तपाईं सम्भावित भ्रमित व्यक्तिको रूपमा ढुवानी गरिएको छ (ध्यान दिनुहोस् कि केहि पनि स्थापित गरिएको छैन, तर तपाईं बस हुन सक्नुहुन्छ वा अलमल्लमा पर्नुहुनेछ)।
मनोविज्ञान भनेको असाइनमेन्टको विस्तार हो जुन नगरपालिकाहरूलाई 1 अक्टूबर 2018 को लागि ठीक ढ working्गले काम गर्ने दृष्टिकोणलाई महसुस गर्न भ्रमपूर्ण ब्यवहार लक्षित समूह भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा दिइन्छ।
उपयुक्त यातायात आवश्यक छ किनकि आपराधिक अपराध नगर्ने व्यक्तिहरू पुलिस कारमा सम्बन्धित छैनन्। थप रूपमा, यस अवस्थामा एम्बुलेन्स प्राय: आवश्यक हुँदैन। उपयुक्त यातायातको प्रयोग गरेर यी व्यक्तिहरू व्यवसायिक रूपमा सुरक्षित, रमाईलो, गैर-कलंकित तरिकामा ढुवानी गरिन्छ। एक वर्षको अवधिमा ZonMW द्वारा पायलट उपयुक्त यातायातका लागि अनुदान प्रदान गरिएको छ। यस अवधिको अवधिमा, यो अनुगमन गरिनेछ कि कहिले र कहिले उपयुक्त यातायात प्रयोग गरिन्छ।
द्वारा एक लेख मा RTV Drenthe 14 अगस्त 2019 बाट हामी देख्यौं कि साइकोल्यान्स प्राय: प्रायः चालित छ। ती सबै गोलमालहरू अचानक कहाँबाट आउँछन्? जे भए पनि, हामीले माथि पत्ता लगायौं कि यसको लागि सब्सिडी भाँडो खोलिएको छ, त्यसैले यसले उत्तेजक प्रभाव पार्छ। मनोविज्ञानले 2018 मा लगभग 900 पटक बाहिर तान्यो, र स्पष्टतः त्यो संघर्षको अलि थियो। तर उल्लेख गरिए अनुसार हामी मिडियाको माध्यमबाट इमेजका साथ प्रोग्राम भएका छौं जुन समाजमा आक्रमकता बढ्दैछ। उदाहरण को लागी, गएको हप्ता हामीले देख्यौं कि युवा हेरचाह कर्मचारीहरु बिरूद्ध आक्रामकता बढेको थियो। के यो केवल एउटा संकेत मात्र होईन कि त्यहाँ सुन्दर ओर्वेलीयन शीर्षक 'हेरचाह' प्राप्त गरेकोबाट त्रास बढेको छ? के हामी GGZ मा शुद्ध छापेहरू र "युवा हेरचाह" भनिने सुन्दर फ्रन्ट ढोका पछाडि पुन: शिक्षा शिविरहरू देखिरहेका छौं (हेर्नुहोस्) यहाँ)?
यद्यपि पुलिसले नियमित रुपमा साइकोलासलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। त्यसपछि एक एजेन्ट कर्मचारीहरु को सुरक्षा को लागी ड्राइभ। दोस्रो वर्षमा जुन मनोविज्ञान चल्छ, आक्रमकतामा सानो वृद्धि देख्न सकिन्छ। "त्यो पक्कै पनि हो किनकि हामी बढी गाडी चलाउँछौं, तर पुलिसले हामीलाई कहाँ फेला पार्ने पनि जान्दछन्," हेन्ड्रिक्स बताउँदछन्।
पहिलेको सोभियत संघमा राज्यले लादिएका विचारहरुको विरोध गर्नेहरुलाई असन्तुष्टि भनिन्थ्यो। रुइनरवल्ड 'भूत परिवार' कहानीले राज्यबाट शिक्षाको विधिसँग असहमत व्यक्तिहरूलाई कलंकित तुल्याएको छ। यी मानिसहरु हुन् जो भूतहरु मा विश्वास गर्छन् र मानिसहरु को लागी आफ्नो आवंटन बगैचा छ। यो 'प्रेत बुबा' सायप्यायरियन थियो (सायद सम्भवतः) साइकोप कथेको अनुसार। हामी यहाँ पहिले नै समाजको तयारी देख्न सक्छौं। जनसंख्या स्वीकृति मोड समय र समय मा ढालिएको छ। राज्यले तपाईंलाई आफ्नो छिमेकीहरूलाई रिपोर्ट गर्न चाहन्छ। त्यो "विकृत व्यवहार" को साथ मानिस हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, भविष्य मा तपाई प्राथमिक स्कूल मा शैक्षिक पाठ संग असहमत हुन सक्छ, जहाँ तपाइँको बच्चाहरु को सिकाइएको छ कि उनी एक बच्चा वा केटी छैन, तर अझै लि still्ग छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। रुइनरवोल्टको भूत परिवार 'साइप' ले यो कलंक सिर्जना गरिसकेको छ कि जब तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कूल बाहिर लैजानुहुन्छ, तपाईं सम्भावित गोलमाल हुनुभएको छ जसले तपाईंको बच्चाहरूलाई "कैद" गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईं सम्भावित रूपमा अलमल्लमा हुनुहुन्छ भने, मनोविज्ञानले तपाईंलाई छिट्टै कानूनी बाधा बिना नै लैजानेछ।
के हामी 'सम्भावित भ्रमित' र 'हेरचाह' को आडमा असन्तुष्टहरूको समाप्ति देखीरहेका छौं? जोसेफ स्टालिन थोरै चिहानमा हाँस्छन् र डच राज्यको क्रूर तरिकाले प्रशंसा गर्दछन् जुन यसले आफ्ना जनतालाई बेच्नको लागि प्रबन्ध गरेको छ। "एक सुरक्षित, रमाईलो, गैर-कलंकित तरीकामा पेशेवर, ट्रान्सपोर्ट गरियो"। गुलाल फिर्ता आएको छ, तर 'केयर' ज्याकेटमा। र GGZ कर्मचारीहरू? हो, तिनीहरूले धितो पनि तिर्नु पर्छ। तिनीहरू किन कसैले छनौट गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा हस्तक्षेप गर्दैनन्। यो कुनै चीजको लागि आवश्यक हुनेछ र ती "भ्रमित व्यक्तिहरू" लाई छिटै शान्त हुनेछ जब उनीहरूले पहिलो इंजेक्शन लिएका थिए। "काम भनेको काम हो, पैसा पैसा हो, यदि मैले यो गर्दिन भने, अरु कोहीले गर्नेछ"। Befehl befehl छ।
नयाँ पुस्तक किन्नुहोस् "वास्तविकता जसरी हामीले यसलाई महसुस गर्छौं", छलका सबै तहहरू पत्ता लगाउँनुहोस् र वर्णन गरिएको समाधान फेला पार्नुहोस्।
स्रोत लिङ्क सूची: mondriaan.eu, rtvdrenthe.nl
प्रत्येक डच व्यक्ति सम्भावित 'भ्रमित व्यक्ति' र मनोवैज्ञानिकको यात्री
आजको परीक्षण बिल बिना एडिड शिपर्स को कैद को बिना कारावास को लागी
ट्याग: आक्रामकता, BART, बुर्स्ट, Els, विशेष, GGZ, एक, हत्या, हत्याको आरोप, मान्छे, मनोविज्ञान, छापे, छापा, सब्सिडी, U., वैन, दोषी, भ्रमित
12 नोभेम्बर 2019 मा 13: 45
वास्तवमा त्यो रुनररोल्डको 'भूत परिवार' लाई के भयो। केहि समयको लागि एक महान hype थियो र त्यसपछि अरू केहि पनि छैन। पृथ्वीको अनुहारबाट स्थिर ??
12 नोभेम्बर 2019 मा 19: 53
किसानहरू कहाँ छन्? निर्माण विश्व? आदि
"kaltgestellt"? खैर, यो धेरै सम्भव छ कि विरोधको मात्र अनुमति दिइन्छ र विशेष गरी यदि तिनीहरू राज्य द्वारा निर्देशित छन् वा राज्यका एजेन्टहरू जसले संगठनलाई 'सेकेन्ड' गरेका छन्। यो पूर्व DDR जस्तो देखिन्छ। होइन, यो यहाँ सम्भव छैन। खोकी
13 नोभेम्बर 2019 मा 21: 37
किसानहरू एक सोसियोपाथ / साइकोफन्टसँग भावनात्मक कुराकानीमा प्रवेश गरेका छन्, तपाईंको लाभबाट गणना गर्नुहोस्।
12 नोभेम्बर 2019 मा 16: 49
मैले सँधै भनेको छु कि श्रम-शक्ति-रहित मानसिकता औसत मादुरोडमका बासिन्दाहरूले गहिरो रूपमा अवशोषित गरेको छ ... पिट कालोनीहरू, ती सबै यातना शिविरहरू कहाँ थिए?
12 नोभेम्बर 2019 मा 19: 22
पूर्व र पश्चिमको आदानप्रदान भएको छ। पर्खाल 30 वर्ष पहिले गिर्यो, तर यो पर्खाल फेरि निर्माण गर्न को लागी समय हो। अमेरिका हेर्नुहोस्, पूर्वी युरोप हेर्नुहोस् र यो समय पश्चिमीहरु डिक हुन्। प्राय जसो तपाईं लेख्नुहुन्छ, तपाईं शरणार्थी समस्या सिर्जना गर्नुहुन्छ र मानिसहरूले पर्खालका लागि चिच्याउँछन् र भित्ताहरूले तपाईंलाई लक गरेको महसुस गर्दैन। सोच्नुहोस् किन कि ट्रम्प ग्रीनल्यान्ड किन्न चाहान्छन्, सबै थोक अलग गर्नुहोस्, सम्भव छैन। भोक खेल, रियलिटी शो।
12 नोभेम्बर 2019 मा 19: 59
पूर्व केटाहरूले प्रयोग गरेका थिए जसले याद गरे कि शुद्ध समाजवादले सामान्य जनसंख्यालाई तल राख्न काम गरेन। आफ्नो उपस्थितिलाई जारी राख्न, केटाहरूले पूर्वे पतन भएको नाटक गरे। बकवास, धुम्रपान र ऐना। केटाहरू अझै पूर्वमा छन्। पूर्वको पतन विशुद्ध दुई विशेष प्रणाली, पूँजीवाद र समाजवादको बीच गाभ्ने उद्देश्यले थियो, शीर्ष व्यक्तिहरू एक अर्कासँग राम्रोसँग समन्वयका साथ। पूर्व र पश्चिम एक ठूलो गुलाग।
13 नोभेम्बर 2019 मा 14: 04
सूर्य, तपाइँ मलाई बताउन सक्नुहुन्न कि 'अन्तिम चरण' 11 /9/ 1989-9 / 11 / 1989 प्रयोगको निर्देशित थियो र यसलाई फेरि उठाउनको लागि यो पूर्ण रूपमा 'विच्छेदन' भएको थियो। आह पूर्ण रूपमा बिर्सिएको थियो, हामी सबै ब्रसेल्सको पोलिटब्युरोको काखमा छौं।
स्क्रिप्टका महिला र सज्जनहरू कहिलेकाँही भूमिका बदल्न मन पराउँछन्। यसले सम्पूर्ण कुरा उत्साहजनक राख्दछ, हैन र? अन्यथा तपाईं चिसो युद्धको साथ काठी हुनुहुन्छ जुन न्यानो हुन चाहँदैन ... 😀
ps: के 1990 को सुरूमा STASI फाईलहरू बर्लिनमा अन्ततः डिजिटलाइज्ड हुनको लागि उच्च ढेरका थिएनन्? ... त्यो समय अझै पक्की थिएन, त्यो अवधि अहिले आइपुगेको छ [हेरास्नेहमेन अन्ड टेस्टिंग]
13 नोभेम्बर 2019 मा 14: 12
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosemarie_Albrecht (उर्सुलाको परिवार 😉?
13 नोभेम्बर 2019 मा 17: 47
सम्पूर्ण विश्व वास्तवमा गुलग हो जहाँ केटाहरू जहाँ भए पनि प्रमुख पदहरू राख्छन्। तिनीहरू जहिले पनि लुकाउँदछन् कि उनीहरू सामान्य व्यक्तिहरूका लागि क्लबका सदस्य हुन्, तर तिनीहरू माझ तिनीहरू एक अर्काको बारेमा जान्छन्, सन्दर्भहरू, र नाम परिवर्तन गर्ने आदि आश्चर्य कार्य गर्दछ। तिनीहरू पनि एक अर्कालाई सिफारिस गर्छन्।
त्यहाँ उनीहरूको बारेमा धेरै कुरा भनिएको छ तर हो हामी तानाशाहीमा बाँचिरहेका छौं र उनीहरूले यो मनपर्दैन जब तपाईं तथ्यहरू बताउनुहुन्छ। तिनीहरूसँग सँधै उच्चतम शब्द हुन्छ, सबै कुरा राम्ररी थाँहा हुन्छ, सँधै प्रशंसा गरिन्छ, ब्ल्याक, ब्ल्याक, ब्ला। अवश्य पनि तिनीहरू आम जनस key्ख्याको मुख्य पदमा केटाहरूको असमान वर्णनलाई प्रश्न गर्न चाहँदैनन्, र उनीहरू वास्तवमा आप्रवासी 'सम्भ्रान्त' हुन् भनेर। यसले तिनीहरूको सुविधाहरू र उनीहरूको सुविधाहरूमा जोखिम बढाउन सक्छ।
13 नोभेम्बर 2019 मा 15: 26
यो उदाहरण को लागी
सबै ठाउँमा चाँडै मनोविज्ञान
13 नोभेम्बर 2019 मा 21: 53
केटा, कस्तो कथा!
अगाथा क्रिस्टी वा अन्य लेखकहरू यो साँचो घटनाको पासोमा पर्दछन्
Alkmaar बाट श्री स्टोकर 🙂
स्टोकर। “दुई महिना अघि उनले साँझ ठूलो स्वर निकालेकी थिइन। मैले भोलिपल्ट फुटबल खेल्नुपरेको थियो, त्यसैले उनलाई सोधिदिन कि ऊ नरम बन्न चाहन्छ। त्यसपछि उनी पछाडि दगुर्दै आइरहेका दुई ठूला भान्छा चक्कुहरू लिएर। मैले समयमै ढोका ढकढक्याएँ। हेर, म ठुलो केटा हुँ, तर मलाई पनि चक्कु फर्काउँदिन। "
14 नोभेम्बर 2019 मा 13: 10
@ मार्गा, के तपाई यो सोच्नुहुन्छ? हामी साइकोल्यान्सको बारेमा कुरा गर्दै थियौं
यो धेरै धेरै अब जाँदै छ
कस्तो डरलाग्दो कुरा, उनी पनि गोली हानी!
14 नोभेम्बर 2019 मा 13: 25
यदि सिंह भाग्छ भने, यो तुरुन्तै गोली हानिएन।
जे भए पनि, त्यस महिलाले पहिले एनेस्थेटिक शटहरू पाउन सक्छिन्।
14 नोभेम्बर 2019 मा 13: 28
सबै मिडिया कथाहरू मानिसहरूलाई कठोर अमेरिकी शैली शैलीको पुलिस हिंसाको लागि प्रयोग गर्नका लागि।
14 नोभेम्बर 2019 मा 21: 31
र तिनीहरू थप माईल जान्छन्:
वर्दी को मामला मा, पुलिस कम हलिउड देखि dystopian साइ-फाइ फिल्महरु भन्दा कम अवर छ।
13 नोभेम्बर 2019 मा 21: 31
केस गन्ध आउँछ, यो स्पष्ट हुन सक्छ ... पारंपरिक पृष्ठभूमि मैले सबैका लागि पहिले कत्ति पनि सुनेको थिएन 😀 झाडू चाँडै जनसंख्याको सबै तहहरू द्वारा निकाल्नुपर्नेछ, प्रतिरोधलाई तोडिनुपर्नेछ।
_ भेल्डिजिटका प्रवक्ताले आरटीभी ओस्टलाई भने कि संदिग्ध अपराधी क्लिनिकको फौजदारी धारामा थियो र त्यसले मनोचिकित्सक उपचार प्राप्त गर्‍यो। ऊ जेलबाट हुनुपर्छ ।_
_ क्लिनिकले ट्रान्सकल्चरल पृष्ठभूमि भएका बिरामीहरूको व्यवहार गर्दछ।
14 नोभेम्बर 2019 मा 01: 24
जर्ज ओर्वेल न्यूजपेक ट्रान्सलेशन मशिनले अनुवाद गरेको हीरोएपभोइडिंगस्केपेनलाई अब भनिन्छ: ट्रान्सकल्चरल साइकियट्रिक केयर
वाह! र सबै कर्मचारीहरूले आफुलाई विश्वास दिलाए कि उनी वास्तवमै राम्रो हेरचाह प्रदान गर्छन्। व्यवस्थित रिपोर्टहरू र प्रबन्धकहरूसँग समूह छलफल।
यदि कसैले त्यो सबै पुनः शिक्षाको बारेमा रिस उठ्छ भने, हामी भन्छौं "तपाईले शान्त कोठामा जानु पर्छ"।
सद्वाद एक चासोको रूपमा प्याकेज गरियो।
“त्यसो त बुबा, आज तपाईंले काममा ती राम्रा व्यक्तिहरूको ख्याल राख्नुभयो? के तपाईले उनीहरूको गोलीको मिश्रण राम्रोसँग तयार गर्नुभयो? "
यो चिन्ताको विषय होइन, यो जेल हो। त्यहाँ बाक्लो स्टील ढोकामा लकहरू छन्। यो जेल हो (म यसलाई फेरि दोहोर्याउँछु)। यो के हो त्यसको लागि हेर्नुहोस्: यो जेल हो। एउटा पुन: शिक्षा शिविर। यो भनेको नाजी जर्मनीमा '40 /' 45 यातना शिविरमा बोलाइएको थियो, तर त्यसपछि हेरचाहको सफा कोटमा। सोभियत संघमा यसलाई "गुलाग" भनिन्थ्यो। त्यहाँ "साइकियाट्रिक बिरामी" शीर्षक अन्तर्गत असन्तुष्टिहरू छन्।
14 नोभेम्बर 2019 मा 01: 28
यसबाहेक, तिनीहरू क्लिनिकली क्यामेरा छविहरू बनाइएका हुन् जुन सम्भावित सबै धारणा हुन्छ कि यो सबै धेरै मिठो र मानव हो।
प्रोपेगान्डा भनेको भनिन्छ।
14 नोभेम्बर 2019 मा 01: 43
YT च्यानल हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् जब यस भर्खरको छविहरू यस हप्ता अपलोड गरिएको थियो। मिडियामा भ्रामक भेडाहरूको धारणालाई रंगाउन कन्ट्रोल गरिएको एउटा अपरेसन चलिरहेको छ। सेवा (न्यायिक संस्था) राम्रो नागरिकलाई यथास्थितिबाट विचलित हुने कुनै पनि चीजबाट जोगाउन छ। मानक
यहाँ अर्को फ्ल्याटु टुक्रा छ जहाँ व्यक्तिले यसको नाम राख्दै पनि चिन्ता गर्दैनन्। यो पनी पत्रकारिताको लागि पास हुनुपर्दछ, यस किसिमका टुक्रा को आपूर्ति गर्छ? शून्य 'न्याय' र 'सुरक्षा' सायद ...
14 नोभेम्बर 2019 मा 02: 02
वास्तवमा ... यो फेरि अद्भुत कथा हो कि औसत ब्रेकफास्ट टेबलले स्वीकार गर्नेछ र कफि पिउने डच जनतालाई अन्धाधुन्ध विश्वास गर्दछ, किनभने पत्रकारिता र त्यसैले यो सत्य हुनेछ ... "उनीहरूले निश्चित रूपमा त्यसो गर्दैनन्"
14 नोभेम्बर 2019 मा 02: 09
यो समन्वय गरिएको छ र म यसलाई सामान्य कालक्रमिक खोजहरूमा प्रदर्शन गर्न सक्दछु। यो VND सदस्य अपस्टेलेनको मार्गदर्शनमा6वर्ष भन्दा पहिले सुरू भयो।
भ्रमित व्यक्तिहरूको स्वागत
स्विच टिम कन्फ्युज व्यवहार
सम्मिश्रण 30 / 09 / 14 भ्रमित व्यक्तिहरूको रिसेप्शन खोल्दै;
"यो सम्भव छ!" मन्त्री I. अपस्टेल्टन द्वारा
14 नोभेम्बर 2019 मा 02: 13
... यो मनोवैज्ञानिक
मन्त्री अपस्टेलेन बिग ब्रदर अवार्डलाई जवाफ दिन्छन्
30 नोभेम्बर 2019 मा 16: 26
हुनसक्छ यो धेरैलाई थाहा भइसकेको छ, तर यो मेरो लागि नयाँ थियो: भ्रमित व्यक्तिहरूका लागि सम्पर्क पोइन्ट पहिल्यै खोलिएको छ!
21 शताब्दीको बोक्सी हन्ट खुला छ! यी अझै स्थानीय प्रयासहरू हुन् जसले गर्दा हामी बिस्तारै एक अर्कामा नजर राख्ने र एक अर्काको व्यवहार सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने बानी बन्न सक्दछौं। यदि त्यो नयाँ मानक हो भने, तब हामी पक्कै पनि एक राष्ट्रिय केन्द्रीकृत संख्या प्राप्त गर्नेछौं।
शिकार सुरु गरौं 🙂
30 नोभेम्बर 2019 मा 18: 04
@ तपाईं किन चाहनुहुन्छ ...
Jeeesus क्रिष्ट टिप्पणी को लागी धन्यवाद, यो बुझ्न नसकिने छ, यो एक मजाक हो।
तर हो !!!
हामी शायद एक अप्ठ्यारो मान्छे को रूपमा Opstelten en masse भन्न सक्छौं।
र यसैले त्यहाँ केही ;-) छन्, निउवेकर्कजे र मर्ने नेक एटिटिरेआ ...
मलाई थाहा छ कि हामीले त्यो प्रणाली प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर उनीहरूले खनेको खाडलमा तिनीहरू आफैंमा पस्न अनुमति दिइन्छ, जुन उनीहरूका नातिनातिनाहरुमा हुनेछ जो अचानक उठ्छन्।
« राज्य र प्रोक्सी अपराध बीचको मुकुट साक्षी र खेल (प्लाज्म्यान विरुद्ध वकिल Meijering)
रोबर्ट जेन्सेनको "डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ विश्व अर्डरमा विश्वास गर्दैनन्" भनेर प्रमाणित गर्दछ: जेन्सेन.एनएल नियंत्रित विपक्षमा छन् »
कुल भ्रमण: 14.659.233